Fampianaran-diso momba an’Andriamanitra
"Fa na dia nahalala an'Andriamanitra aza izy, dia tsy mba nankalaza Azy toy izay miendrika ho an'Andriamanitra, na nisaotra Azy, fa tonga zava-poana izy tamin'ny fisainany, ary tonga maizina ny fony donto." - Rôm. 1:21.
Iray amin'ireo fitaka lehibe indrindra ampiasain'i Satana ny fampianarana milaza fa ao anatin'ny zavaboary rehetra Andriamanitra. Maneho an'Andriamanitra amin'ny endrika diso izany, ary manala baraka ny fahalehibiazany sy ny fiandrianany.
Tsy avy ao amin'ny Tenin'Andriamanitra ireo tsangan-kevitra mivoy ny maha-Andriamanitra ny zavatra rehetra. An'ny maizina izany ary ao anatin'ny tontolon'ny filan-dratsy. Manome vahana ny fo sy ny fironany izany. Fisarahana amin'Andriamanitra no vokatry ny fanekena izany. (...)
Hery iray ihany no afaka manapaka ny gejan'ny faharatsiana izay mamatotra ny fon'olombelona, dia ny herin'Andriamanitra ao amin'i Jesôsy Kristy izany. Ny ran'llay nofantsihina teo amin'ny hazo fijaliana ihany no hahadio antsika amin'ny fahotana. Ny fahasoavany ihany no hahafahantsika manohitra sy mandresy ireo fironana maro amin'ny maha-voary lavo antsika. Tsy misy heviny ny tsangan-kevitra mikasika an'Andriamanitra ataon'ireo mpilalao angatra. Raha ao anatin'ny voary rehetra Andriamanitra, dia ao amin'ny olona Izy araka izany; ary mba hahatraran'ny olona ny fahamasinana àry, dia ny hery ao aminy ihany no ampiasainy.
Manapotika ny fivavahana kristianina ireo tsangan-kevitra ireo sy ny tsoa-kevitra entiny. Manilika ny filana ny fanavotana izany, ary mahatonga ny olona ho mpamonjy ny tenany ihany. Mahatonga ny Tenin'Andriamanitra tsy hanana ny lanjany ireo tsangan-kevitra mikasika an'Andriamanitra ireo, ary tandindomin-doza lehibe ireo izay manaiky izany ka hanjary hihevitra ny Baiboly iray manontolo ho anganongano ihany. Mety hihevitra ny fahatsaran-toetra ho tsara noho ny fahalemena izy, kanefa manaisotra an'Andriamanitra tsy ho eo amin'ny fiandrianany ka miankina amin'ny herin'olombelona izay tsinontsinona raha tsy eo Andriamanitra. Tsy manana hery hanoherana sy handresena ny ratsy ny sitrapon'olombelona raha tsy misy manampy azy. Torotoro ireo fiarovan'ny fanahy. Tsy manana fefy miaro amin'ny fahotana ny olombelona. Rehefa lavina ny fefin'ny Tenin'Andriamanitra sy ny Fanahiny dia tsy fantatsika izay lalina hiletehantsika.
Hanimba ny fanandramany amin'ny maha-Kristianina azy ireo izay manohy mifikitra amin'ireo tsangan-kevitry ny filalaovana angatra, hanapaka ny fifandraisany amin'Andriamanitra izy ary ho veriny ny fiainana mandrakizay.- Ev, tt. 601,602.